Wehelka Sare ee Xafiisyada Sharciga Soo Dejinta ee Shanghai
Master of Law, Jaamacadda Renmin ee Shiinaha
Mudane Tian waa rafiiq aasaasi ah iyo jaal sare oo ka tirsan Xafiisyada Sharciga Soo Dejinta ee Shanghai, cilmi baare marti ah oo ka tirsan Jaamacadda Amniga Bulshada ee Shiinaha, Xoghayaha Guud ee "Madasha Halista Sharciga ee Shiinaha (Suzhou)" ee Fangyuan Magazine （Fangyuan Magazine waxaa kormeeraya. Maamulaha Sare ee Dadka Sare）, lataliyaha ka baxsan xerada ee Jiangsu Normal University Law School iyo xubin ka tirsan hayadaha maaraynta sare ee shirkadaha ku taxan aqoonsiga ee ay aqoonsatay Komishanka Nidaaminta Amniga Shiinaha.
Kahor inta uusan ku biirin Xafiisyada Sharciga Soo Dejinta ee Shanghai, Mudane Tian wuxuu ku soo tababartay shirkad caalami ah oo caan ka ah qareenka wuxuuna u magacaabay xubin ka tirsan Guddiga Dambiyada ee shirkadda sharciga ee degmada Shiinaha. Waxaa soo wariyay warbaahin badan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin Daily People, China Youth Daily, Sina, Sohu. Mr. Tian wuxuu macaamiisha ka difaacay kiisas badan oo waaweyn, oo mid ka mid ah uu ku lug leeyahay ganacsade caan ah oo ka tirsan Ururka Taishan iyo mas'uulka ugu sareeya dowladda ee ku lugta leh qaraxii Kunshan.
Iyada oo leh aasaas aragtiyeed iyo khibrad wax ku ool ah, Mudane Tian wuxuu had iyo jeer ku dadaalaa xuquuqda sharciga iyo danaha macaamiishiisa. Kiisas badan ayaa ladiiday oo aan dacwad lagu soo oogin si loo helo saameyn sharci ah oo dambi la'aan ah. Intaa waxaa sii dheer, wuxuu siiyay shirkado dhowr ah adeegyo sharciyeed dambiyeed, oo ay ku jiraan ka hortagga khatarta sharciga dambiyada iyo la-dagaallanka musuqmaasuqa.
Hordhac jihada ganacsiga kooxda
U noqoshada difaac ahaan tuhmanayaasha dambiyada loo haysto iyo eedeysanayaasha heerarka baaritaanka, baaritaanka dacwad soo oogista, maxkamadeynta, dib u eegista xukunada dilka iyo hababka kale ee ciqaabta
Ka wakiil noqoshada dhibbanayaasha ka qaybgalka dacwadaha ciqaabta iyo sameynta fal dambiyeed fal dambiyeed madani ah
Iyagoo matalaya dhinacyada inay soo sheegaan kuna eedeeyaan kiisaska ciqaabta ah
Ka wakiil ahaanshaha dhinacyada inay fayl gareeyaan dacwadaha gaarka ah ee danbiyada
Tababar iyo la-talin ku saabsan ka hortagga khataraha sharciyeed ee danbiyada shirkadaha iyo ganacsatada iyo ka hortagga dambiyada rasmiga ah
Adeegyada aan dacwada ciqaabta ahayn
Adeegyada kale ee sharciga ee la xiriira dambiyada
Telefoonka: +86 137-1680-5080
Wakiilka Sharciga ee Shirkadda Shiinaha, Shirkadda Sharciga Qoyska ee Shiinaha, Shirkadda Sharciga Furitaanka Shiinaha,